Posted by Fros on July 14, 2016
တော်တော်များများက Remaster နဲ့Remake ကိုမှားတက်ပါတယ် တိုတိုနဲ့ လိုရင်းကိုပြောရရင် Remaster ဆိုတာက ထွက်ပြီးသား Game တစ်ခုကိုပဲ Game Engine ကို Update လေးတင်လိုက်တာပါပဲ ... Game ကတော့ ဘာမှမပြောင်းပါဘူး ..ဒီ Game ပါပဲ ... Remake ကတော့အရင်ရှိပြီးသား Game ကို Update တင်တာမဟုတ်ပဲ အဲ့Game ရဲ့ အရင်ကပါဝင်ပြီးသားသဘောတရားတွေကို ဟိုး0ကနေပြန်ပြီးအစအဆုံး ပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေ လက်နက်အသစ်တွေ Character အသစ်တွေ Engine အသစ်တွေကို Gameplay ကိုပါ လုံးဝ အစအဆုံးပြန်ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Developer တွေအနေနဲ့Remaster နဲ့Remake မှာ Remake က အတော်လေး Risk များပါတယ် ... အစအဆုံးပြန်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့ အပြင် အရင် Game အဟောင်းကိုဆော့ ထားသူတွေက အခု ပြန်ပြီးအသစ်ရေးထားတဲ့Remake ကိုလက်ခံနိုင်ပါ့ မလား ဆိုတာတွေရှိပါတယ် .. အချိန်လဲပိုကုန်သလို ငွေကလဲ စိုက်ရတာပိုများပါတယ် ... Remaster ကတော့အရင်ရှိပြီးသား Game ကိုပဲ Same Story , Same Gameplay , Same in everything ကို ပဲ Graphic ကို Update တင်ပြီး Frame rate ကို ငြိမ်အောင်နဲနဲလေး Update ပြန်ပြီး ပြုပြင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ဆော့ ရတာကတော့ဒီ Game ပါပဲ .. ဥပမာ နှစ်ခုပေးရရင် Skyrim ပဲဖြစ်ပါတယ် .. အခုအသစ် ပြန်ပြီးထွက်လာမဲ့Skyrim Remaster က အရင် ထွက်ထားတဲ့Skyrim ပါပဲ .. Same Story , Same Characters , Same Weapons , Same Side stories , Same Game ပါပဲ .. အဲ့ ဒါကို Graphic ကို Update တင်ပြီးပြန်ထုပ်တာပါပဲ .. ဘာ အသစ်မှထပ်မထည့် ထားပါဘူး .. အရင် game အဟောင်းမှာထွက်ပြီးသား DLC တွေကိုပါပြန်ပေါင်းထည့် တယ် Graphic ကို Update တင်တယ် Frame Rate ကို ငြိမ်အောင်ပြန်လုပ်တယ် ဒါပါပဲ .. ငွေကုန်ကြေးကျပိုနည်းသလို အချိန်ပေးရတာလဲ တိုပါတယ်။ Developer တွေအနေနဲ့ရောင်းမထွက်မှာလဲမကောင်းဖြစ်မှာလဲမပှုရပါဘူး။ တကယ်ဆိုရင် Skyrim Remaster ဟာဆိုရင် Fallout4ကိုမလုပ်ခင်ထဲကသူတို့ လုပ်ပြီးသွားပါပြီ Skyrim မှာ အားလုံးပြီးသွားစီးသွားတော့ မှ သူတို့Fallout 4ကို့စလုပ်တာပါ .. ကြေညာတာက အခုမှကြေညာတာဆိုပင်မဲ့ အရင်ထဲကလုပ်ပြီးသားပါ။ PC တွေမှာက Mod တွေနဲ့ အရင်ထဲက PC သမားတွေအတွက်ကရပြီးဖြစ်နေတော့Developer တွေအနေနဲ့ က PC အတွက်ဘာမှထပ်လုပ်ပေးစရာမလိုတော့ ပါဘူး.. အဲ့ ဒါကြောင့် မရောင်းပဲနဲ့.. ဟေး .. ခင်ဗျားတို့ မှာကရှိပြီးသားဆိုတော့ရော့ အလကားသာယူသွာူပါဗျာ .. မရသေးတဲ့Console သမားတွေအတွက်ကအခုမှပြန်ပြီးရောင်းမှာပါဆိုပြီးလုပ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲပြောပြော Remaster Game တစ်ခုဟာဘယ်လောက်ပဲလှနေတယ်ပဲပြောပြော ခင်ဗျားကိုရောင်းနေတာက လွန်ခဲ့ တဲ့2011 တုံးက Game တစ်ခုပါပဲ ဘာမှထပ်ထည့် ထားခြင်းမရှိသလို ဘာအပိုမှထပ်မပါပါဘူး .. အဲ့ လို Remaster Game တွေကို Full Price(60$) ဘယ်တော့ မှမပေးရပါဘူး။ Remake တွေသာ Full Price ပေးချင်ပေးရမှာပါ။ Fallout4ဟာဆိုရင် Skyrim မှာသုံးထားတဲ့Same Engine ပါပဲ ပိုပြီး Update ဖြစ်တဲ့Version နဲ့ လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Remake တစ်ခုကို ဥပမာပေးရရင် PS4 မှာ ထွက်ထားတဲ့Ratchet & Clank ပဲဖြစ်ပါတယ် .. PS2 မှာထွက်ထားတဲ့Ratchet & Clank ကိုပဲ လုံးဝ ဟိုးအစကနေပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး လက်နက်အသစ်ကြီးတွေ Engine အသစ်ကြီးတွေ Character အသစ်တွေ Sub Stories အသစ်တွေပါထည့် ထားတာကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Final Fantasy7Remake ပါ အရင် Game ရဲ့Character တွေနဲ့ဇာတ်အိမ်ကိုပဲပြန်ယူထားတာဖြစ်ပင်မဲ့Gameplay , Style , Sub stories , World နဲ့Story တောင်မှ ကွဲချင်ကွဲအောင်ပြန်လုပ်လို့ ရပါတယ် ... ဒါပင်မဲ့လူတွေလက်ခံနိုင်ပါ့ မလားဆိုတာ က Remake တွေရဲ့Risk ဖြစ်ပြီး Remaster ကတော့ကိုယ်အခုဆော့ နေတဲ့Game ကို ပဲ Graphic လေးမဆိုသလောက်တင် ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဟာကတော့Remaster နဲ့Remake တို့ ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုပဲဖြစ်လို့ နောက်ဆိုကိုယ်ဝယ်မှာကဘာလဲဆိုတာသိရင် ကိုယ့် အတွက် ပို ကီးကိုက်ပြီးဝယ်သင့် မ၀ယ်သင့် ဆုံးဖြတ်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်ဗျာ ^_^
Credit to KhantRyder
Remaster and Remake ဘာကှာလဲ ?
တျောတျောမြားမြားက Remaster နဲ့Remake ကိုမှားတကျပါတယျ တိုတိုနဲ့ လိုရငျးကိုပွောရရငျ Remaster ဆိုတာက ထှကျပွီးသား Game တဈခုကိုပဲ Game Engine ကို Update လေးတငျလိုကျတာပါပဲ ... Game ကတော့ ဘာမှမပွောငျးပါဘူး ..ဒီ Game ပါပဲ ... Remake ကတော့အရငျရှိပွီးသား Game ကို Update တငျတာမဟုတျပဲ အဲ့Game ရဲ့ အရငျကပါဝငျပွီးသားသဘောတရားတှကေို ဟိုး0ကနပွေနျပွီးအစအဆုံး ပွနျလုပျထားတာဖွဈပွီး ဇာတျလမျးအသဈတှေ လကျနကျအသဈတှေ Character အသဈတှေ Engine အသဈတှကေို Gameplay ကိုပါ လုံးဝ အစအဆုံးပွနျရေးထားတာပဲဖွဈပါတယျ
Developer တှအေနနေဲ့Remaster နဲ့Remake မှာ Remake က အတျောလေး Risk မြားပါတယျ ... အစအဆုံးပွနျလုပျရတာဖွဈတဲ့ အပွငျ အရငျ Game အဟောငျးကိုဆော့ ထားသူတှကေ အခု ပွနျပွီးအသဈရေးထားတဲ့Remake ကိုလကျခံနိုငျပါ့ မလား ဆိုတာတှရှေိပါတယျ .. အခြိနျလဲပိုကုနျသလို ငှကေလဲ စိုကျရတာပိုမြားပါတယျ ... Remaster ကတော့အရငျရှိပွီးသား Game ကိုပဲ Same Story , Same Gameplay , Same in everything ကို ပဲ Graphic ကို Update တငျပွီး Frame rate ကို ငွိမျအောငျနဲနဲလေး Update ပွနျပွီး ပွုပွငျထားတာပါဖွဈပါတယျ ဆော့ ရတာကတော့ဒီ Game ပါပဲ .. ဥပမာ နှဈခုပေးရရငျ Skyrim ပဲဖွဈပါတယျ .. အခုအသဈ ပွနျပွီးထှကျလာမဲ့Skyrim Remaster က အရငျ ထှကျထားတဲ့Skyrim ပါပဲ .. Same Story , Same Characters , Same Weapons , Same Side stories , Same Game ပါပဲ .. အဲ့ ဒါကို Graphic ကို Update တငျပွီးပွနျထုပျတာပါပဲ .. ဘာ အသဈမှထပျမထညျ့ ထားပါဘူး .. အရငျ game အဟောငျးမှာထှကျပွီးသား DLC တှကေိုပါပွနျပေါငျးထညျ့ တယျ Graphic ကို Update တငျတယျ Frame Rate ကို ငွိမျအောငျပွနျလုပျတယျ ဒါပါပဲ .. ငှကေုနျကွေးကပြိုနညျးသလို အခြိနျပေးရတာလဲ တိုပါတယျ။ Developer တှအေနနေဲ့ရောငျးမထှကျမှာလဲမကောငျးဖွဈမှာလဲမပှုရပါဘူး။ တကယျဆိုရငျ Skyrim Remaster ဟာဆိုရငျ Fallout4ကိုမလုပျခငျထဲကသူတို့ လုပျပွီးသှားပါပွီ Skyrim မှာ အားလုံးပွီးသှားစီးသှားတော့ မှ သူတို့Fallout 4ကို့စလုပျတာပါ .. ကွညောတာက အခုမှကွညောတာဆိုပငျမဲ့ အရငျထဲကလုပျပွီးသားပါ။ PC တှမှောက Mod တှနေဲ့ အရငျထဲက PC သမားတှအေတှကျကရပွီးဖွဈနတေော့Developer တှအေနနေဲ့ က PC အတှကျဘာမှထပျလုပျပေးစရာမလိုတော့ ပါဘူး.. အဲ့ ဒါကွောငျ့ မရောငျးပဲနဲ့.. ဟေး .. ခငျဗြားတို့ မှာကရှိပွီးသားဆိုတော့ရော့ အလကားသာယူသှာူပါဗြာ .. မရသေးတဲ့Console သမားတှအေတှကျကအခုမှပွနျပွီးရောငျးမှာပါဆိုပွီးလုပျတာဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲပွောပွော Remaster Game တဈခုဟာဘယျလောကျပဲလှနတေယျပဲပွောပွော ခငျဗြားကိုရောငျးနတောက လှနျခဲ့ တဲ့2011 တုံးက Game တဈခုပါပဲ ဘာမှထပျထညျ့ ထားခွငျးမရှိသလို ဘာအပိုမှထပျမပါပါဘူး .. အဲ့ လို Remaster Game တှကေို Full Price(60$) ဘယျတော့ မှမပေးရပါဘူး။ Remake တှသော Full Price ပေးခငျြပေးရမှာပါ။ Fallout4ဟာဆိုရငျ Skyrim မှာသုံးထားတဲ့Same Engine ပါပဲ ပိုပွီး Update ဖွဈတဲ့Version နဲ့ လုပျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ Remake တဈခုကို ဥပမာပေးရရငျ PS4 မှာ ထှကျထားတဲ့Ratchet & Clank ပဲဖွဈပါတယျ .. PS2 မှာထှကျထားတဲ့Ratchet & Clank ကိုပဲ လုံးဝ ဟိုးအစကနပွေနျလုပျထားတာဖွဈပွီး လကျနကျအသဈကွီးတှေ Engine အသဈကွီးတှေ Character အသဈတှေ Sub Stories အသဈတှပေါထညျ့ ထားတာကိုတှေ့ ရမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုက Final Fantasy7Remake ပါ အရငျ Game ရဲ့Character တှနေဲ့ဇာတျအိမျကိုပဲပွနျယူထားတာဖွဈပငျမဲ့Gameplay , Style , Sub stories , World နဲ့Story တောငျမှ ကှဲခငျြကှဲအောငျပွနျလုပျလို့ ရပါတယျ ... ဒါပငျမဲ့လူတှလေကျခံနိုငျပါ့ မလားဆိုတာ က Remake တှရေဲ့Risk ဖွဈပွီး Remaster ကတော့ကိုယျအခုဆော့ နတေဲ့Game ကို ပဲ Graphic လေးမဆိုသလောကျတငျ ထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီဟာကတော့Remaster နဲ့Remake တို့ ရဲ့ ကှဲပွားခွားနားမှုပဲဖွဈလို့ နောကျဆိုကိုယျဝယျမှာကဘာလဲဆိုတာသိရငျ ကိုယျ့ အတှကျ ပို ကီးကိုကျပွီးဝယျသငျ့ မဝယျသငျ့ ဆုံးဖွတျဖို့ အထောကျအကူဖွဈမယျလို့ မြှျောလငျ့ ပါတယျဗြာ ^_^